नोकियाको नोकिया १.४ बजारमा, मूल्य कति ? – Clickmandu
नोकियाको नोकिया १.४ बजारमा, मूल्य कति ?
क्लिकमान्डु २०७७ फागुन १७ गते १८:०७ मा प्रकाशित
काठमाडौं । नोकिया फोनहरूको होम्स एचएमडी ग्लोबलले आज आफ्नो नयाँ स्मार्टफोन नोकिया १.४ सार्वजनिक गरेको छ ।
एचएमडी ग्लोबलका हेड अफ पान एसियाका रबि कुँवरले भने, ‘म दुई जनाको बुबाको रूपमा, म थुप्रै परिवारले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरूसंग जोडिन सक्दछु । यी आवश्यकताहरू बढ्दै जाने क्रममा, हामी एक विश्वसनीय र रमाइलो अनुभव सिर्जना गर्न चाहन्थ्यौं जसले परिवारका सबै सदस्यहरूलाई कुनै पारिवारिक आर्थिक दबाव नबढाइ वास्तवमै लाभदायक बनाउँदछ ।’
चाहे त्यो कामका लागि इमेल व्यवस्थापन गर्ने, बिलहरू भुक्तान गर्ने वा बच्चाहरूलाई अनलाइन अतिरिक्त क्रियाकलापमा व्यस्त राख्ने, हाम्रो डिजाइनरहरूले संसारभरका लाखौं परिवारहरू बढी समय घरमा बिताइरहेका छन् भन्ने तथ्यलाई सम्बोधन गरेको छ ।
प्रतिक्रियामा हामीले नोकिया १.४मा स्क्रीनको आकार अधिकतम क्षमतामा बढायौं ताकि अभिभावक, हेरचाहकर्ता र बच्चाहरू जडित र लाभकारी रहन सक्नेछन् ।
नोकियोको यो मोडलमा थप फोटोग्राफी अनुभव बृद्धि गर्न –गुगलको एआई द्वारा पहिले नै सुधारेको क्यामेरा गो एपमा हामीले घर वा बाहिरका उत्कृष्ट क्लोज–अपहरू क्याप्चर गर्न म्याक्रो क्यामेरा पनि थपेका छौं । क्वालकम्मद्वारा संचालित, यो एक विश्वस्त उद्योग लिडर, र हाम्रो प्रसिद्ध दुई दिनको ब्याट्री जीवनको साथ एक कडा र दुर्घटनामुक्त बडी छ ।
नयाँ बिस्तारित एचडी प्लस स्क्रिन भिडियो कलिंग एपको साथ आउँदछ जुन परिवारलाई वर्तमान अवस्थाको बीचमा जडित रहन मद्दत गर्दछ, र नोकिया १.४को क्यामेरा क्षमता प्रदर्शन गर्दछ ।
गुगलको क्यामेरा गो एपमा जडित डुअल क्यामेरा सेटअपले तपाईंलाई कुनै पनि समयमा तथा कम प्रकाशको अवस्थाहरूमा समेत उच्च गुणस्तरको फोटोहरू लिन मद्दत गर्दछ । क्यामेरा गो एप र नोकिया १.४ को डुअल रियर र फ्रन्ट–फेसिङ क्यामराको शक्तिशाली संयोजनले परिवारको अनमोल यादहरूलाई आश्चर्यजनक बोकेह पाट्रेट र कम–प्रकाश सुन्दर शटहरूमा खिच्दछ । ब्लर पृष्ठभूमिमा प्रोफेशनल फोटोहरू खिच्न पाट्र्रेट मोडको साथ बहुमूल्य पारिवारिक क्षणहरू क्याप्चर गर्नुहोस् । र, कलर रिच तथा र क्रिप्स कम–प्रकाश शटहरू लिन फ्ल्याशको आवश्यकता बिना नै नाइट मोड प्रयोग गर्नुहोस् । सहयोगी स्टोरेज सूचकहरूले स्पेसको सबै चिन्ताहरु ह्टाउछ ताकि तपाईं स्न्यापलाई जारी राख्न सक्नुहुन्छ ।
यो एक सुलभ फोन हो जुन तपाईं फर्केर कस्तो अवस्थामा आउनेछ भन्ने चिन्ता नगरी खुशीसाथ बच्चाहरूलाई हस्तान्तरण गर्न सकिनेछ ।
डिजाइन अनुसार यो कुनै पनि हातमा सुरक्षित रूपमा बस्न तैयार गरिएको छ र यसमा क्वालकाम चिपसेट र फिंगरप्रिन्ट सेन्सर समावेश छ ।
नोकिया स्मार्टफोन मूल्यहरूमा सत्य रहँदै, नोकिया १.४ एन्ड्रोइड १० (गो संस्करण) र अझ बढिका लागि तयार छ । यो हाम्रो अद्वितीय एन्ड्रोइड प्रतिज्ञाहरू र कम्तिमा तीन वर्ष सुरक्षा अपडेटहरूको साथ कामहरू गर्ने छिटो र अधिक सुरक्षित तरिका प्रदान गर्दछ र तपाईं निश्चिन्त हुन सक्नुहुन्छ किनकी तपाईंको फोन बाहिरी र भित्रको जस्तो सुकै अवस्थाका लागि उत्तम ठहर हुनेछ ।
अन्तर्निहित प्यारेन्टल नियन्त्रणहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई गुगल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरिएको सामग्री प्रबन्ध गर्न अनुमति दिन्छ, र उनीहरूको शान्ति दिँदै उनीहरुले चाहेसम्म बच्चाहरूलाई मनपर्ने सामग्री सुन्न, सिक्न वा खेल्न अनुमति दिन्छ । र, ब्याट्री जीवनको बारेमा चिन्ता गर्न कुनै आवश्यकता छैन ।
नोकिया १.४ ले तपाईंलाई एकै साथ मनोरन्जन दिँदै जडित राख्नेछ यसको लागि फोनको प्रभावशाली पावरप्याकको सुधारिएको दुई दिन ब्याट्री क्षमतालाई धन्यवाद ।
त्यसो भए, यो लामो भिडियो कलहरू तथा स्ट्रिमिंग गर्न वा गेमहरु खेल्न सम्पूर्ण परिवारलाई एकजुट राख्न यसमा पर्याप्त भन्दा बढी शक्ति छ ।
साधारण परिवारको साप्ताहिक खाना खर्चको आधा लागतमा अत्याधुनिक प्रविधि चाहने जो कोहीका लागि यसको मूल्य निकै आकर्षक छ ।
नयाँ म्याक्रो क्यामेराको साथ तपाईं घर बाहिर हुँदा स्लागहरू, बगहरू र फुलहरूको नजिक विवरणहरू क्याप्चर गर्दछ वा युटिलिटी बिलको सानो प्रिन्ट राम्रोसंग हेर्न सक्नुहुनेछ । २ दिनको ब्याट्री जीवनको साथ सजिलै बच्चाहरू मार्फत गुगल मिटद्वारा बिहानको रेजिष्ट्रेसन र तपाईंको कार्य टोलीको दिउँसो भिडियो कल गर्न सक्नुहुन्छ । ५० यूरो नोटको आकारको स्क्रिनको साथ उत्कृष्ट भ्यूंग अनुभव प्रदान गर्दछ ।
तपाईंको बच्चालाई हिँड्न, कुराकानी गर्न, बोल्न सिक्न र आफ्नै कथाहरू सुनाउन लाग्ने समयसम्म तीन वर्षको मासिक सुरक्षा अपडेटहरूको साथ अप्डेटेड रहनुहोस् ।
नोकिया १.४ नेपालमा १७ फागुन देखि उपलब्ध हुनेछ र यो २जीबी÷३२जीबी, र्याम र रोममा १२ हजार ८९९ रुपैयाँमा ग्रे र पर्पल डस्क कलर भेरियन्टमा उपलब्ध हुनेछ ।